Kukuvadza kwekunyanyisa formaldehyde mumotokari mats. Dhata kubva kuNational Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) inoratidza kuti tsaona dzemumigwagwa dzinokonzerwa nemateti emota dzinowanzoitika. Zvinofungidzirwa kuti diki mota bonde inogona zvakare br ...
Munguva yepashure-denda, tarisa pane mutsva maitiro emota mateki.
Munguva yepashure-denda, tarisa pamaitiro matsva emotokari matsva Kuputika kwe COVID-19 muna 2020 kwakamanikidza guta kuti rimanikidze bhatani rekumbomira. Mushure mehupenyu hwemhuri hurefu nenhau dzisingaverengeke nezvekurwisa denda, munhu wese ane kufunga kutsva ...
DEAO kutanga pagumi nematanhatu Automechanika Shanghai
Kambani yedu inobata 16th Automechanika Shanghai kuNational Exhibition uye Convention Center (Shanghai) kubva Zvita 02 kusvika 05, 2020 Ndatenda zvikuru nekuramba uchitsigira kambani yedu, Pane ino chiitiko, Changzhou Deao Vehicle Technology Co, Ltd. wou ...
China yakagara ichinzi fekitori yenyika. Nekuvandudzwa kwesimba rakazara rehupfumi reChina, mukana mukuru wemusika waita kuti musika weChinese uve-unoona mabrands epasi rese. Makambani emarudzi akawanda uye zvigadzirwa zvepasi rose zvakamhanyira ...
Ndezvipi zvinhu TPE?
Ikozvino izvo TPE zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hupenyu, zvinogona zvakare kuonekwa kuti TPE zvigadzirwa zvave zvishoma nezvishoma zvave kudikanwa muhupenyu hwedu, saka chii chiri tpe mbishi zvigadzirwa? TPE inogadzirwa sei? Kubva pane izvi kuti unzwisise: ...